မျက်ဖြေ ရဲ့ အဆက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မျက်ဖြေ ရဲ့ အဆက်
မျက်ဖြေ ရဲ့ အဆက်
Posted by မောင် ပေ on Jul 1, 2011 in Creative Writing |3comments
မနက် ၄ နာရီကျော်သည် နှင့် ဆိုးပေ အိပ်ယာမှ ထ ကာ ကျောင်းဝန်းထဲ သန့် ရှင်းရေး လုပ်နေသည် ။ မြို့ တော်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၏ အုန်းမောင်းခေါက်ချိန် မှာ ရွာထက် နောက်ကျသည် ။ ကျောင်းရှိ ဝေယျာဝစ္စ များ ကို အကုန်လုပ်ပြီး ဘကြီးကို စောင့်နေသည် ။ ဘုန်းဘုန်း တို့ ကို မနက်အာရုံဆွမ်း ကပ်ပြီး ဘကြီး နှင့်အတူ ဆွမ်းပေါင်း နှင့် ထမင်း လွေးရသည် ။
` အဘ ဆိုက်ကား တစ်စီး ကို ၂ သိန်းကျော် ပေးရတယ် ဆို ´
` မင့် ဘယ်သူ ပြောတာလဲ ´
` မနေ့ က ကားဂိတ်က စီးလာတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာ က ပြောသွားတာ အဘ ရဲ့ ´
` ဟားဟားဟားဟား…. အဲဒါ မင်း ကို လိမ်ချင်လို့ ၊ မင်း များ စိတ်ဝင်စားရင် သူ့ ဆိုက်ကားအစုတ် ကို မင်းထိုးရောင်းချင် လို့အဲ့ဈေးပြောပြီး မင့် အယုံသွင်းသွားတာ ´
` ဒါဆို ဆိုက်ကား တစ်စီး က ဘယ်လောက် တန်တာလဲ အဘ ၊ ကျွန်တော် မနေ့ က ဆိုက်ကားစီးလာရင်း စဉ်းစားမိတာ ဆိုက်ကား နင်းမလားလို့ ´
` ဟို တစ်လော က တို့ ကျောင်း ဆိုက်ကားထောင်စားတဲ့ ဆွမ်းဒကာ ရောင်းလိုက်တာ ကတော့ ၅ သောင်း ကျော်ပဲ ရတယ် ဆိုလား ၊ မင်း က ဆိုက်ကား နင်းရအောင် ဒီမြို့ က လမ်းတွေ သိတာ ကြနေတာပဲ ´
` သြော်… လေ့လာရမှာပေါ့ဗျာ ၊ မြို့ ထဲ သွားရင်း လာရင်း ´
` အေး.အေး မင်း လောလောဆယ် မြို့ ထဲ သွားလည် ရင်း ကြည့်ကြည့်ခဲ့ဦးပေါ့ ။ ဘာအလုပ် လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ မင်းသိလာမှာပါ ´
ဆိုးပေ မြို့ ထဲ ထွက်လာခဲ့သည် ။ မြို့ တော် ကြီး သည် သူ့ အတွက် အရမ်းခမ်းနား ထည်ဝါနေသည် ။ ကားများ ဆိုင်ကယ် များ ဖြင့် သွားလာ နေကြသည် ။ ကျားမ မရွေး ကြည့်လိုက်မည် ဆိုလျှင် သန့် သန့် ပြန့် ပြန့် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ။ တီရှပ် အဖြူ ၊ ချည်ပုဆိုးလေး ၀တ်ထားသူ ဆိုးပေ ခဗျာ သွားရလာရတာ ရှိန်နေသည် ။ နေရာ တစ်ကာ ကြည့်လိုက်မည် ဆိုလျှင် တိုက်ကြီးတွေ ဖြင့် ဟိန်းနေသည် ။ တန်ခိုးကြီး ဘုရား ဖူးခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း သို့ ပြန်လာခဲ့သည် ။ ဇရပ် ပေါ်တက် လဲလျှောင်းနေစဉ် ကျောင်းဝင်း ထဲသို့ လူစိမ်း ၂ ယောက် ၀င်လာသည် ကို တွေ့ လိုက်ရသည် ။
` ဘုန်းဘုန်း ရှိလား ညီလေး ´
` ရှိပါတယ် အကို ဘုန်ဘုန်း ဒီအချိန်ဆို မကျိန်းလောက်သေးဘူး ၊ ကျောင်းပေါ်တက်သွားလိုက်ပါ ´
ခဏနေကြတော့ ဘုန်းဘုန်း နှင့် ထို လူစိမ်း ၂ယောက် ဇရပ်ပေါ်သို့ပြန်ရောက်လာသည် ။ လူစိမ်း၂ယောက် က ခရီးဆောင် အိတ်တွေ နဲ့ ….။
` ဒကာ ဆိုးပေ ၊ ဒီက ဒကာတွေ က ဖားကန့် ကို ခရီးသွားမယ့် ဒကာတွေ ကွဲ့ ၊ မသွားခင် စပ်ကြား တို့ ကျောင်းမှာ ၃၊၄ ရက်တန်သည် တည်းကြမယ် ။ ဒကာကြီး သူတို့ ကို နေရာ ချပေးထားလိုက်ပါဦး ´
` တင်ပါ့ဘုရား ၊ တပည့်တော် စီစဉ် ပေးလိုက်ပါ့မယ် ´
ဆိုးပေ လည်း ထိုသူ နှစ်ယောက် ကို သူ စတည်းချ နေသော ဇရပ်ပေါ်တွင် နေရာ စီစဉ်ပေးလိုက်သည် ။ သူ တို့ နာမည် များမှာ ဝေလု နှင့် ငြိမ်းလတ်ဆွေ တို့ ဟု သိရသည် ။ ခဏတွင်း မှာ ပင် ဆိုးပေ နှင့် အဖွဲ့ ကျသွားကြသည် ။
` ကိုဆိုးပေ က ဘာအလုပ် လုပ်သလဲဗျ ´
` ကျွန်တော် ဒီရောက်တာ မကြာသေးဘူးဗျ ။ ရွာမှာ က အဖေကော အမကော မရှိကြတော့ဘူးလေ ။ ဒါနဲ့ ရှိတာလေး ရောင်းပြီး ကြီးပွားရာ ကြီးပွားကြောင်း ရှာဖို့မြို့ တက် လာတာ ။ အခုထိတော့ ဘာလုပ် လို့ လုပ်ရမလဲ မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး ဗျာ ။ ´
` ကျုပ်တို့ ကတော့ ဖားကန့် ကျောက်သွားတူး ကြမလို့ ဗျ ၊ ဒါနဲ့ကိုဆိုးပေ က ဘာတွေ ရောင်းလာခဲ့တာလဲ ´
` အဖေ တို့ ထားခဲ့တဲ့ လယ်လေး ၃ ဧက ထဲပါဗျာ ။ ရတာမှ မဖြစ်စလောက်လေး ရယ်ပါ ။ ရွာမှာတော့ များတာပေါ့ ။ အခု မြို့ ရောက်မှ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး ´
` အေးပေါ့ဗျာ…ဒီလိုပါပဲ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာဖွေကြရတာပဲ မလား ။ ခင်ဗျား စိတ်ကူး မရှိသေးရင် ကျုပ်တို့ နဲ့ဖားကန့် လိုက်ခဲ့ပါလား ´
` အခု လောလောဆယ် တော့ မလိုက်ချင်သေးဘူးဗျ ။ ဒီမှာ ဘာမှ မလုပ်ကြည့်ရသေးဘူး ၊ စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ် ´
` ကောင်းပြီလေ ၊ ကိုဆိုးပေ ဒီမှာ အဆင်မပြေ ရင် ဖားကန့် တက်လာခဲ့ပေါ့ ။ ဟိုကြမှ ဆုံကြသေးတာပေါ့ ´
သို့ နှင့်….၂ရက်ကြာပြီး ၊ မနက်ခင်း ။ ထုံးစံ အတိုင်း ကျောင်း ဝေယျာဝစ္စ များ လုပ်ပြီး ၊ ဘုန်းဘုန်း တို့ အာရုဏ်ဆွမ်း ကပ်ပြီး ၊ ဘကြီး က ပြောလာသည် ။
` ဆိုးပေ မင်း ဘာလုပ်မယ် မစဉ်းစားရသေးခင် ။ မင်း ပိုက်ဆံတွေ ကို ဘာမှ မလုပ်သေးခင် ဘဏ်ထဲ သွားထည့် ထားပါလား ´
` ဘဏ်ထဲ ထည့်ရင် ဘာဖြစ်သလဲ ဘကြီး ´
` ဟ.. အတိုး ရတာပေါ့ ကွ ၊ မဟုတ်လဲ မင်းဘာမှ မလုပ်သေးမယ့် အတူတူ ဘဏ်ထဲ ထည့်ထားလိုက်တော့ ဘဏ်တိုး လေး ရတာပေါ့ ကွ ´
` ဒါဆို ဘကြီး လိုက်ပို့ ပေးဗျာ ။ ကျွန်တော် က တော့ ဘာမှ သိတာ မဟုတ်ဘူး ´
` အေးအေး….ဘုန်းဘုန်း တို့ နေ့ ဆွမ်း စားပြီး ချိန် လောက် မင်းနဲ့ ငါ နဲ့ သွားကြတာပေါ့ ၊ ပိုက်ဆံ တွေ ထုတ်ထားလိုက် ´
မနက်စာ စားပြီး ဆိုးပေ တစ်ယောက် သူ့ ငွေထုတ်လေး ထည့်ထားသော သံသေတ္တာ သော့လေး ကို သော့ဖွင့် ရန် သော့ထိုးလိုက်သော အခါ သော့တံ မလှည့် ရသေးမှီ သော့ခလောက် မှာ ပွင့်ထွက်လာသည် ။ ဆိုးပေ လည်း မျက်လုံး မျက်ဆံ ပြူးသွားပြီး သေတ္တာထဲ ကြည့်လိုက်တော့ ဗလာနတ္ထိ ………. ။
( ယခု ပို့ စ်တင်သည့် အချိန် မှာ အတော် ကို မိုးချုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည် ။ အဆုံး ထိ တိုက်ပင်း ရိုက်ချင် သော်လည်း ၊ မှေးစင်းလာသော မျက်ခွံ တို့ဆန္ဒကို လွန်ဆံ နိုင်စွမ်း မရှိပါသဖြင့် နားလည်ပေးကြပါရန် တောင်းပန်ပါသည် ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် )
မျက်လုံး မှေးမှေးနဲ့ ဗလာ နတ္တိ ဖြစ်နေတာ မြင်လိုက်တယ်ပေါ့။
ဆူး ပြောတာ သေတ္တာထဲက ပစ္စည်းနော်..
မန်းတုန်းက မန်းလိုက်တာ အခု ပြန်ဖတ်လိုက်မှ ဆိုလိုရင်း တမျိုး ဖြစ်အောင် တွေးနေကြမှာ စိုးလို့ ပြန်လာ ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖြည့်စွက် အဟာရ ကတော့ ဒျူးမက်စ် 1 ပလက်စ် တဲ့ ။